Chikumbiro Chemhedzisiro Citizenity of Saint Lucia | Hugari hweSanta Lucia
Chikumbiro Chemhando Chekugara kweSanta Lucia
Iyo Citizenship ne Investment Board inotarisa kunyorera fomu rekunyorwa uye mhedzisiro yacho inogona kunge iri yekupa, kuramba kana kunonoka nekuda kwechikonzero, chikumbiro chekuva chizvarwa nekudyara.
Ivhareji yekugadzirisa nguva kubva pakugamuchira fomu rekuzivisa kune mhedzisiro yemwedzi mitatu (3). Iko, mune zviitiko zvakasarudzika, zvinotarisirwa kuti nguva yekugadzirisa ichave yakareba kupfuura mwedzi mitatu (3), mumiririri akagamuchirwa achaziviswa nezvechikonzero chekunonoka kwekufungidzirwa.
Chikumbiro chekuva mugari wemo nekudyara chinofanirwa kuendeswa mune zvemagetsi uye zvakadhindwa fomu nemumiririri ane mvumo pachinzvimbo chemunyori.
Zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kupedzwa kuChirungu.
Zvinyorwa zvese zvakaunzwa pamwe nechiratidziro zvinofanirwa kunge zviri muChirungu Mutauro kana shanduro yakasimbiswa muChirungu Mutauro.
NB: Shanduro yakasimbiswa inoreva shanduro yakaitwa neye muturikiri nyanzvi anozivikanwa zviri pamutemo kudare redzimhosva, mubatanidzwa wehurumende, sangano renyika dzese kana chimwe chinzvimbo chakadaro, kana chakaitwa munyika isina vashanduri vanobvumidzwa. dudziro yakaitwa nekambani ine basa rayo kana bhizinesi riri kuita shanduro dzehunyanzvi.
OSE magwaro anotsigira anodiwa anofanirwa kusungirwa kunyoreswa zvisati zvagadziriswa neYunivhesiti.
Zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kuperekedzwa neinodiwa isiri kudzoreredzwa kugadziriswa uye nekuda kwehukosha mari yemubvunzi mukuru, mukadzi kana mukadzi wake uye mumwe nemumwe anokodzera anovimba.
Mafomu asina kunyoreswa ekunyorera achadzoserwa kune anenge abvumidzwa mumiriri.
Panopihwa chikumbiro cheugari hwemo nekudyara, Chikamu chichazivisa mumiriri akapiwa basa kuti mari inofanirwa kubhadhara uye inofanirwa kubhadharisa hurumende mari inobhadharwa.
Kana chikumbiro chakarambwa, iye anogona kukumbira kuti aongororwe neGurukota nekunyora.